18 ဧပြီ၊ 2021
မစုမြတ်မွန် (VOA) နှင့် ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေ (Australia)
နိုင်ငံခြားရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ Australia လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း အမြဲတမ်းကော်မတီရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီခွဲမှာ ဧပြီလ (၁၃) ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကို ကြားနာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားနာပွဲကနေ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ၊ တုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကြားနာပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း တင်ပြခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေ က ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေတွေအပေါ် Australia နိုင်ငံရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ မစုမြတ်မွန် က ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကို ဆက်သွယ်မေးထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေရှင့်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဧပြီလ (၁၃) ရက်နေ့တုန်းက သြစတေးလျနိုင်ငံရဲ့  လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းရဲ့  နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီတစ်ခုမှာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြားနာပွဲလုပ်တယ်။ အဓိကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သြစတေးလျမှာရှိတဲ့ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းတွေရဲ့  အမြင်သဘောထားတွေကို သိချင်လို့ ကြားနာပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီကြားနာပွဲမှာ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ပြောတဲ့ တင်ပြဆွေးနွေးကြတဲ့ လူတွေအကုန်လုံးက ဘာပြောတာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ သြစတေးလျနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မျာ သံခင်းတမန်ခင်းအရ တိုးတိုးတိတ်တိတ် နားချတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ Quite Diplomacy လုပ်မနေနဲ့။ အခုအချိန်က ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဖို့ လိုပြီဆိုပြီးတော့ အားလုံးက ပြောသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုတော့ လက်ရှိ သြစတေးလျနိုင်ငံရဲ့  မြန်မာနိုင်ငံပေါ် ကိုင်တွယ်မှုအပေါ် ဘယ်လောက်အထိ အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေကြလို့ အဲဒီလိုမျိုး ပြောရတာလဲ။ အဲဒါကို အရင်ဦးဆုံး သိပါရစေ။
ဖြေ ။ ။ ဒီကြားနာပွဲ ဖြစ်လာရတာကိုက သြစတေးလျအစိုးရရဲ့  လက်ရှိကိုင်တွယ်ပုံကို ကျေနပ်အားရမှု မရှိလို့ ဖြစ်လာရတာပါ။ အဲဒီတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ အားရမှုမရှိဘူး။ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ အတိုက်အခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင် အာဏာရပါတီရဲ့  အမတ်တွေကအစ လက်ရှိနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ အစိုးရရပ်တည်ချက်ကို အများကြီးဝေဖန်လာကြတယ်။ ကွန်မြူနီတီကလည်း ဝေဖန်တယ်။ သုတေသီတွေနဲ့ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့အခါကြတော့ လွှတ်တော်က ဒို့ဒီအသံကို တရားဝင်ကြားနာပွဲလုပ်မယ်။ လုပ်ပြီးတော့ ဒီကြားနာပွဲကနေ ရရှိလာတဲ့ တွေ့ရှိချက်ကို အစိုးရကို report တခုအနေနဲ့ပေးပြီးတော့ မူဝါဒပြောင်းအောင် ကြိုးစားဖို့ ပါလီမန်ရဲ့  ကြိုးစားချက်လို့ ယူဆပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်တခုက ပိတ်စို့ဒဏ်ခတ်မှုပေါ် တိုက်တွန်းနေတဲ့ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေတို့ တိုက်တွန်းချက်တွေမှာ ပြောသွားတာ ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေ၊ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေနဲ့ မတူတော့ဘူး။ အခုအချိန်မှာ ဒဏ်ခတ်အရေးယူတဲ့အခါမှာ ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်အရေးယူမယ်ဆိုရင် ထိရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ တင်ပြသွားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်ပဲ အဲဒီလို ဘာကြောင့်ပြောနိုင်ပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ တချို့ ပြောကြတာတွေကတော့ အရင်တုန်းက စစ်အစိုးရက စီးပွားရေးပိတ်စို့မှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုလုပ်လဲ အလကားပါပဲ။ ပြည်သူတွေက ခံရတာပါလို့၊ ပြည်သူတွေပဲ ခံစားရမယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါကို opposite side ကပေါ့။ ကျနော်တို့က မတူဘူး။ လုပ်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း စစ်အုပ်စုက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  စီးပွားရေးကို ချုပ်ထားတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) နဲ့ မတူတော့ဘူး။ အကုန်ချုပ်သွားတာ။ သူတို့လက်ထဲမှာ အကုန်ရနေတာ။ စီးပွားရေးဦးပိုင်နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်အောက်မှာ အများကြီးရောက်သွားပြီ။ သူတို့လည်ပတ်နေတဲ့ ငွေရေးကြေးရေး အတိုင်းအတာက အစိုးရတရပ်ထက် ကြီးနေတဲ့ နေရာတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအချိန်မှာ သူတို့ကို စီးပွားရေးအရ Targeted Sanction ပိတ်စို့ဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် အများကြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ သူတို့ကို ကျနော်တို့ ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ သူတို့တွေရဲ့  ရပ်တည်ချက်ကို ခြိမ်းခြောက်လို့ရတယ်။ ဒီလိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းက သူတို့ရပ်တည်ချက်တင်မကဘူး၊ အခု သူတိုိ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့ဟာတွေကို ပုံစံပြောင်းသွားဖို့။ နောက်ဆုံး ကျနော်တို့ သြစတေးလျအစိုးရကိုတောင် ပြောခဲ့သေးတယ်။ လုပ်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် သူတို့က Professor Sean Turnell လွတ်မြောက်လာဖို့ကို ကြိုးစားနေတယ်။ သံတမန်ရေးနဲ့လည်း ကြိုးစားနေတယ်။ စစ်တပ်က ဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူး။ အခုထက်ထိလဲ မလွတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ကပြောတာ ဒီအစိုးရ နားလည်တဲ့စကားက တခွန်းပဲရှိတယ် ‘Pressure’ အဲဒီစကားကိုပဲ သူတို့နားလည်တယ်။ Pressure ပေးပါ။ စနစ်တကျ ဒဏ်ခတ်အရေးယူပါ။ ဒီကောင်တွေ ပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းသည် Professor Sean Turnell လွတ်ဖို့အတွက်လည်း အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်တခုက ဒီကြားနာပွဲကိုကြည့်ရင် သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ သြစတေးလျ လွှတ်တော်အမတ်တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နောက်တချက်က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့  အခန်းကဏ္ဍ။ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရုတ်ရဲ့  ကာကွယ်နေမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ သူတို့မေးတာတွေကို တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကိုယ်တိုင်ကလဲ ပြောခဲ့ပါတယ် သြစတေးလျအစိုးရအနေနဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို တရုတ်ကို အကာအကွယ်မပေးဖို့ သြစတေးလျနိုင်ငံအနေနဲ့ နားချနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်ပဲ သြစတေးလျနိုင်ငံအနေနဲ့ တရုတ်ကို အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ်ဘက်ပါလာအောင်လို့ ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်မယ့် အခြေအနေ တကယ်ရှိလို့လားရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်ကတော့ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ နောက်တခုကလဲ သြစတေးလျမှာ ပိုပြီးတော့ သြဇာရှိတာက အာဆီယံအသိုင်းအဝိုင်း။ အဲဒီအပေါ် သြစတေးလျ သြဇာက ပိုရှိပါတယ်။ ရှိတော့ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးမှာ သူတို့ဝင်ပါတယ်။ ဝင်ပါတဲ့အကြောင်းရင်းက စစ်အုပ်စုသည် သူတို့အတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ ယူဆတယ်။ NLD အစိုးရ၊ အရပ်သားအစိုးရထက်စာရင် စစ်အုပ်စုက သူတို့ရဲ့  အကျိုးစီးပွားကို ပိုပြီးတော့ ဆောင်ကျဉ်ပေးမယ်။ ဒါကလဲ သမိုင်းသာဓကတွေ ရှိတာကြောင့် သူတို့က အဲဒီဘက် ရပ်တာပေါ့။ သို့သော် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့  သူတို့အပေါ် နာနာကျည်းကျည်း မုန်းတီးမှုတွေ သူတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ နောက်တခုက သူတို့ရဲ့  အကြီးမားဆုံး အကျိုးစီးပွား - ရေနံပိုက်လိုင်းတွေ၊ ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းတွေက ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတယ်။ အဲဒီတော့ အခုဆိုရင် သူတို့တဖြည်းဖြည်း မြင်လာပြီ။ ဒါကြောင့်လဲ သူတို့ CRPH ကို Approach ချဉ်းကပ်တယ်။ သူတို့ရဲ့  အကျိုးစီးပွားတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံတယ်။ တောင်းဆိုတယ်။ ဒါက သူတို့မှားတဲ့ဘက်ကို ရောက်နေပြီ အတိုင်းအတာတခုအထိ မြင်လာပြီပေါ့။ အဲဒီတော့ သူတို့စစ်အစိုးရကို ထောက်ပံ့နေသရွေ့ ၊ သူတို့ရဲ့  interest က အမြဲတမ်းခြိမ်းခြောက်ခံနေရမှာ။ ဒါကို သူတို့မြင်လာတယ်။ မြင်လာတော့ ကျနော်တို့က သြစတေးလျအစိုးရကို ဒီပေါ်မှာ နင်းပေးပါ။ ဒီပေါ်မှာ နင်းပေးပါ။ ဒီပေါ်မှာ နင်းပြီးမှ တရုတ်အစိုးရကို သူတို့နားလည်အောင် သူတို့ရဲ့  မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို တကယ်တမ်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်တာ၊ တကယ်တမ်း လုံခြုံမှုပေးနိုင်တာ ရွေးကောက်ပွဲနည်းလမ်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ တက်လာတဲ့ အရပ်သားအစိုးရသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ပိုပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်လာအောင် အစိုးရက တွန်းပေးပါ။ တဘက်ကလဲ အာဆီယံနိုင်ငံတွေလည်း သူတို့တွန်းပေးပါ။ ဒီလို တွန်းပေးခြင်းအားဖြင့် တရုတ်က ဒီပေါ် နားလည်သွားရင် သြစတေးလျနဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့  အခုရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးတောင်မှ ပိုပြီးတော့ အပြုသဘောဆောင်လာတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်အနေနဲ့လည်း ကျေးဇူးတင်မယ်ပေါ့။ ဒါက လမ်းကြာင်းတခု။ ဒီလမ်းကြောင်းကလဲ Crisis ကြီးကို ကျော်လွှာသွားဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတခုလို့လဲ ကျနော်တို့က တွန်းခဲ့ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒီသြစတေးလျ ကြားနာပွဲမှာ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေအပါအဝင် သြစတေးလျမှာ ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ လဲ တက်ပြီးတော့ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ အားလုံးကပြောတဲ့ထဲမှာ CRPH ကို ထောက်ခံပါ။ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပါ။ သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပါဆိုတာကို အားလုံးတိုက်တွန်းတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေဆိုရင် CRPH နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကို ကိုယ်တိုင်ကြားကနေ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ဆိုတာမျိုးကို ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ်တိုက်တွန်းသလိုမျိုး တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ အလားအလာက အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ အခုကြားနာပွဲမှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာကွန်မြူနီတီထဲမှာလည်း ကျနော်တို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကလဲ CRPH က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သြစတေးလျပါလီမန်ထဲမှာ အခု Parliament Friends of Myanmar ဆိုပြီး Senator Dean Smith က ဦးဆောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ ပါလီမန်အစုအဖွဲ့ကလည်း CRPH ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့တွေက လိုအပ်ရင်လဲ Liaison လုပ်ပေးဖို့ ready ပါပဲ။ သူတို့ဘက်ကလဲ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပါလီမန်အဆင့်ထက် ကျော်ပြီးတော့ အစိုးရကလည်း ထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။ အခုက အစိုးရက မလှုပ်သေးဘူး။ ပါလီမန်က very active. ဒါကြောင့် အစိုးရလည်းလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ဘက်မှာလဲ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို သူတို့သိအောင် ဒီရေးရာကော်မတီကနေ အသိပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီကြားနာပွဲလုပ်တဲ့ လွှတ်တော်ကော်မတီထဲမှာပါတဲ့ သြစတေးလျလွှတ်တော်အမတ်တွေ တချို့ ကိုယ်တိုင်က ပြောတယ် သြစတေးလျအစိုးရ လုပ်နေတာတွေကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာကို ကြားရပါတယ်။ ဆိုတော့ အခုလိုမျိုး သြစတေးလျမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့  သဘောထားအမြင်တွေ၊ တိုက်တွန်းမှုတွေကို ကြားရတဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်အမတ်တွေကနေ သြစတေးလျအစိုးရကို အခုထက်ပိုပြီးတော့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ဘယ်လောက်အထိ လုပ်နိုင်မယ်လို့ တွန်းအားပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားသလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ကတော့ တော်တော်လေး မျှော်လင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလို Public Hearing ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ပိုမျှော်လင့်တာပေါ့။ ပထမတော့ သူတို့ရဲ့  ပါလီမန်ထဲမှာ ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာ motion မြန်မာပြည်ကို ပိုပြီးတော့ ထိရောက်တဲ့ အကူအညီတွေ၊ ထိရောက်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ လုပ်ဖို့ဆိုတာမျိုးကို လွှတ်တော်အမတ်တွေက တိုက်တွန်းလာတယ်။ ဒါက ပထမအဆင့်။ ဒီ motion ကြောင့်မို့ သူတို့ပါလီမန်ထဲမှာ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပေါ်လာတယ်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေကလည်း မေးခွန်းတွေ အများကြီးထုတ်လာတယ်။ ဝေဖန်မှုတွေ အများကြီးလုပ်လာတယ်။ လက်ရှိအစိုးရရဲ့  လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာ။ အခု ကြားနာပွဲကတော့ ပါလီမန်ရဲ့  မူဝါဒရေးရာပိုင်းကို ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း။ နိုင်ငံခြားရေးရာနဲ့ ပြည်ပဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရေးရာကော်မတီက ကြားနာတာ။ သူတို့က ပုံမှန်လွှတ်တော်ထဲမှာ အစည်းအဝေးလုပ်သလိုမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီကြားနာပွဲကနေ အစီရင်ခံစာတခု ထွက်လာမယ်။ အစိုးရက ဘယ်လိုရပ်တည်ပါဆိုတာ။ ဒီကြားနာတဲ့ ကော်မတီမှာ ပါတီပေါင်းစုံက ပါတယ်။ ဒီ Affair Committee ဥက္ကဋ္ဌက Mr. Dave Sharma က အာဏာရပါတီရဲ့  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်။ နောက် နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော့်တော်ကို သြဇာကြီးတဲ့လူ။ အခု သြစတေးလျအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Senator Marise Payne ကို တော်တော်လေးသြဇာရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့ သိထားတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကြားနာပွဲကတဆင့် သြစတေးလျအစိုးရရဲ့  မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ဖို့အတွက် အလွန်ကြီးတဲ့တွန်းအားတခု ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက် မြန်မာနိုင်ငံရေး ကြားနာပွဲမှာ ပြောတဲ့နောက်တခုကကြတော့ ပြည်တွင်းမှာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် နယ်စပ်ဘက်တွေကို တိမ်ရှောင်ထွက်ပြေးကြတဲ့ အခြေအနေ။ အဲဒီလို တိမ်ရှောင်ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေ များလာမယ့် ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ထွက်ပြေးလာမယ့်သူတွေ များလာမယ်ဆိုရင် ဒေသတွင်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်မှုကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အချက်ကိုပါ ထောက်ပြကြတာ တွေ့ပါတယ်။ သြစတေးလျနိုင်ငံအနေနဲ့ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ မတည်ငြိမ်မှုတွေကနေ ဒေသတွင်းမှာ တည်ငြိမ်မှုပျက်ပြားလာမယ့် ဂယက်ကို ဘယ်လောက်အထိ ဒီအပေါ်မှာ စိုးရိမ်မှုရှိသလဲဆိုတာကို ပြောပြပါလားရှင့်။
ဖြေ ။ ။ သူတို့ အဲဒါကို တော်တော်လေး စိုးရိမ်မှုရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကြားနာပွဲကို တက်ရောက်ပြောကြားမယ့် လူတွေကို မေးခွန်းတွေ (၄) ခု မေးထားတယ်။ Emphasize လုပ်တာပေါ့။ အဲဒီအထဲမှာ မေးခွန်းတခုက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီစစ်အစိုးရက ဘယ်လောက်ထိကြာကြာ အုပ်ချုပ်သွားနိုင်သလဲ။ ဒါက သူတို့ စိုးရိမ်တာ။ အဲဒီမေးခွန်းနဲပ ပတ်သက်လို့ ကျနော်ဖြေခဲ့တာက ဒီစစ်အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တတိယအကြိမ်လည်တာ။ သံသရာစက်ဝိုင်း Vicious Circle - ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်သာ ဒီနိုင်ငံမှာ တည်မြဲနေသရွေ့  ဒီလိုသံသရာစက်ဝိုင်းကြီးက ဆက်လည်နေမှာ၊ အဖန်တလဲလဲ ဖြစ်နေအုံးမှာ။ ဘယ်တော့မှ ပြီဆုံးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ် ရှိနေသရွေ့  ဒီဒုက္ခသည်ပြဿနာတွေ ရှိနေမယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာတွေလည်း ရှိမယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုရင် သြစတေးလျက အကြီးအကျယ် ခံနေရတာ။ တနှစ်ကို သြစတေးလျအစိုးရက ၁.၇ ဘီလီယံ သုံးရတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှာလည်း အများဆုံး ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ Methamphetamine စိတ်ကြွဆေး ဖြစ်တယ်။ အဲဒီဆေးက အများဆုံး မြန်မာပြည်ကလာတာ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်မှာထုတ်သလဲဆိုရင် မြန်မာနဲ့ တရုတ်၊ လားအိုနယ်စပ်တွေမှာ ထုတ်နေတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Raw Materials တွေက တရုတ်ကလာတာ။ အဲဒီတော့ အစိုးရက ဒီဟာတွေ ရင်ဆိုင်နေရပြီ၊ ခံစားနေရပြီ။ ကျနော်က ပြောခဲ့တယ် It’s enough သြစတေးလျအစိုးရအနေနဲ့ ခံစားနေရတာ လုံလောက်ပြီ။ အဲဒီတော့ သြစတေးလျအစိုးရရဲ့  National Interest က ဘာလဲဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ဖို့ National Interest လို့ ကျနော် ပြောခဲ့ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံး မေးချင်တာက ဧပြီလ (၁၃) ရက်နေ့တုန်းက သြစတေးလျလွှတ်တော် ကြားနာပွဲမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အရေး ကြားနာပွဲကနေ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုရလဒ်တွေ ထွက်လာနိုင်သလဲ။ နောက်ဆုံး ဥပမာ လွှတ်တော်ကနေ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုး ဘယ်လောက်အထိ ရလဒ်တွေ ထွက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းလို့ ရသလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်ကတော့ တော်တော်လေးကို Positively အပြုသဘောဆောင်မယ့် ရလဒ်တွေ အများကြီးရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားမှာ ဒီကြားနာပွဲပြီးရင် ကျနော်တို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကို ပြန်ပို့မယ်။ သူတို့သိချင်တာတွေကိုလည်း ထပ်မေးမယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ဖြေခဲ့ရတဲ့ အဖြေပေါ်မှာ၊ ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင် ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်။ သူတို့ဆိုလိုတာက Very comprehensive responses တွေကို ယူမယ်။ ကျနော်တို့ နှုတ်နဲ့ပြောတာတင်မကဘူး၊ ပြန်စဉ်းစားပြီး ဖြေပေးတာကိုယူမယ်။ ဒါတွေကို အခြေခံပြီး သူတို့က သေချာပေါက် Report တခု ထွက်မှာပဲ။ ကြားနာပွဲကနေ ဘာတွေရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ သြစတေးလျအစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ကို သူတို့က သြစတေးလျအစိုးရအနေနဲ့ ဒီအနေအထားမှာ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်။ လက်ရှိ မူတွေနဲ့ ကိုက်ညီခြင်း ရှိမရှိဆိုတာတွေကို သုံးသပ်တယ်။ နောက် တိုက်တွန်းမှုတွေပါတဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်လာမယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဒါက နံပတ် (၁)။ နံပတ် (၂) က ဒီကြားနာပွဲလေးတခုနဲ့ မပြီဘူး။ ကျနော်တို့ကလဲ ကျနော်တို့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေအတွက် ဒီကော်မတီနဲ့ ကျနော်တို့ ဆက်ပြီးတော့ Follow up လုပ်နေမယ်။ တိုက်တွန်းနေမယ်။ ချိတ်ဆက်မှုတွေ ရှိနေမယ်ဆိုတော့ One of activities မဟုတ်ပါဘူး။ တချိန်တည်း ပြီးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဆက်လုပ်နေမှာပါ။
မစုမြတ်မွန် ။ ။ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေ အခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင့်။
ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေ ။ ။ ကျနော်ကလည်း ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
နိုငျငံခွားရေးရာနဲ့ဆိုငျတဲ့ Australia လှတျတျောနှဈရပျပေါငျး အမွဲတမျးကျောမတီရဲ့ နိုငျငံခွားရေးနဲ့ ထောကျပံ့ကူညီရေးဆိုငျရာ ကျောမတီခှဲမှာ ဧပွီလ (၁၃) ရကျနကေ့ မွနျမာနိုငျငံအခွအေနကေို ကွားနာခဲ့ပါတယျ။ ဒီကွားနာပှဲကနေ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ထိရောကျတဲ့ အရေးယူမှုတှေ၊ တုံ့ပွနျမှုတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ကွားနာပှဲမှာ မွနျမာနိုငျငံအကွောငျး တငျပွခဲ့သူတယောကျဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှေ က ပွောပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက အခွအေနတှေအေပျေါ Australia နိုငျငံရဲ့ ကိုငျတှယျပုံနဲ့ ပတျသကျလို့ မစုမွတျမှနျ က ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှကေို ဆကျသှယျမေးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ မင်ျဂလာပါ ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှရှေငျ့။ VOA မွနျမာပိုငျးအစီအစဉျကို ကွိုဆိုပါတယျ။ ဧပွီလ (၁၃) ရကျနတေု့နျးက သွစတေးလနြိုငျငံရဲ့ လှတျတျောနှဈရပျပေါငျးရဲ့ နိုငျငံခွားရေးရာကျောမတီတဈခုမှာ မွနျမာ့အရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ကွားနာပှဲလုပျတယျ။ အဓိကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျလို့ သွစတေးလမြှာရှိတဲ့ မွနျမာအသိုငျးအဝိုငျးတှရေဲ့ အမွငျသဘောထားတှကေို သိခငျြလို့ ကွားနာပှဲလုပျတယျဆိုတော့ အဲဒီကွားနာပှဲမှာ ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှအေပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံကိစ်စနဲ့ပွောတဲ့ တငျပွဆှေးနှေးကွတဲ့ လူတှအေကုနျလုံးက ဘာပွောတာတှရေ့သလဲဆိုတော့ သွစတေးလနြိုငျငံအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံပျေါမြာ သံခငျးတမနျခငျးအရ တိုးတိုးတိတျတိတျ နားခတြာမြိုး မလုပျပါနဲ့ Quite Diplomacy လုပျမနနေဲ့။ အခုအခြိနျက ပွတျပွတျသားသားလုပျဖို့ လိုပွီဆိုပွီးတော့ အားလုံးက ပွောသှားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဆိုတော့ လကျရှိ သွစတေးလနြိုငျငံရဲ့ မွနျမာနိုငျငံပျေါ ကိုငျတှယျမှုအပျေါ ဘယျလောကျအထိ အားမလိုအားမရ ဖွဈနကွေလို့ အဲဒီလိုမြိုး ပွောရတာလဲ။ အဲဒါကို အရငျဦးဆုံး သိပါရစေ။
ဖွေ ။ ။ ဒီကွားနာပှဲ ဖွဈလာရတာကိုက သွစတေးလအြစိုးရရဲ့ လကျရှိကိုငျတှယျပုံကို ကနြေပျအားရမှု မရှိလို့ ဖွဈလာရတာပါ။ အဲဒီတော့ လှတျတျောကိုယျတိုငျကလဲ အားရမှုမရှိဘူး။ လှတျတျောအမတျတှေ၊ အတိုကျအခံ ကိုယျစားလှယျတှအေပွငျ အာဏာရပါတီရဲ့ အမတျတှကေအစ လကျရှိနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနဲ့ အစိုးရရပျတညျခကျြကို အမြားကွီးဝဖေနျလာကွတယျ။ ကှနျမွူနီတီကလညျး ဝဖေနျတယျ။ သုတသေီတှနေဲ့ ထောငျ့ပေါငျးစုံကနေ ဝဖေနျခံနရေတဲ့အခါကွတော့ လှတျတျောက ဒို့ဒီအသံကို တရားဝငျကွားနာပှဲလုပျမယျ။ လုပျပွီးတော့ ဒီကွားနာပှဲကနေ ရရှိလာတဲ့ တှရှေိ့ခကျြကို အစိုးရကို report တခုအနနေဲ့ပေးပွီးတော့ မူဝါဒပွောငျးအောငျ ကွိုးစားဖို့ ပါလီမနျရဲ့ ကွိုးစားခကျြလို့ ယူဆပါတယျ။
မေး ။ ။ နောကျတခုက ပိတျစို့ဒဏျခတျမှုပျေါ တိုကျတှနျးနတေဲ့ ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှတေို့ တိုကျတှနျးခကျြတှမှော ပွောသှားတာ ဘာတှရေ့သလဲဆိုတော့ ၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈပိုငျးတှေ၊ သက်ကရာဇျ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈပိုငျးတှမှော ဒဏျခတျအရေးယူမှုတှနေဲ့ မတူတော့ဘူး။ အခုအခြိနျမှာ ဒဏျခတျအရေးယူတဲ့အခါမှာ ပဈမှတျထား ဒဏျခတျအရေးယူမယျဆိုရငျ ထိရောကျတယျဆိုပွီးတော့ တငျပွသှားကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။ တကယျပဲ အဲဒီလို ဘာကွောငျ့ပွောနိုငျပါလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ တခြို့ပွောကွတာတှကေတော့ အရငျတုနျးက စဈအစိုးရက စီးပှားရေးပိတျစို့မှုတှကေို ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျခဲ့တယျ။ အခုလုပျလဲ အလကားပါပဲ။ ပွညျသူတှကေ ခံရတာပါလို့၊ ပွညျသူတှပေဲ ခံစားရမယျလို့ ပွောကွတယျ။ ဒါကို opposite side ကပေါ့။ ကနြျောတို့က မတူဘူး။ လုပျပါ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး စဈအုပျစုက မွနျမာနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေးကို ခြုပျထားတာက လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ (၂၀) နဲ့ မတူတော့ဘူး။ အကုနျခြုပျသှားတာ။ သူတို့လကျထဲမှာ အကုနျရနတော။ စီးပှားရေးဦးပိုငျနဲ့ မွနျမာ့စီးပှားရေးကျောပိုရေးရှငျအောကျမှာ အမြားကွီးရောကျသှားပွီ။ သူတို့လညျပတျနတေဲ့ ငှရေေးကွေးရေး အတိုငျးအတာက အစိုးရတရပျထကျ ကွီးနတေဲ့ နရောတှေ ရှိနတေယျ။ အဲဒီတော့ ဒီအခြိနျမှာ သူတို့ကို စီးပှားရေးအရ Targeted Sanction ပိတျစို့ဒဏျခတျမယျဆိုရငျ သူတို့အတှကျ အမြားကွီးဒုက်ခရောကျနိုငျတယျ။ သူတို့ကို ကနြျောတို့ ကောငျးကောငျးဒုက်ခပေးနိုငျတယျ။ သူတို့တှရေဲ့ ရပျတညျခကျြကို ခွိမျးခွောကျလို့ရတယျ။ ဒီလိုခွိမျးခွောကျခွငျးက သူတို့ရပျတညျခကျြတငျမကဘူး၊ အခု သူတို့ဖိနှိပျခြုပျခယျြနတေဲ့ဟာတှကေို ပုံစံပွောငျးသှားဖို့။ နောကျဆုံး ကနြျောတို့ သွစတေးလအြစိုးရကိုတောငျ ပွောခဲ့သေးတယျ။ လုပျကွညျ့ပါ။ ဒီလိုလုပျလိုကျရငျ သူတို့က Professor Sean Turnell လှတျမွောကျလာဖို့ကို ကွိုးစားနတေယျ။ သံတမနျရေးနဲ့လညျး ကွိုးစားနတေယျ။ စဈတပျက ဘာမှမတုံ့ပွနျဘူး။ အခုထကျထိလဲ မလှတျဘူး။ ကနြျောတို့ကပွောတာ ဒီအစိုးရ နားလညျတဲ့စကားက တခှနျးပဲရှိတယျ ‘Pressure’ အဲဒီစကားကိုပဲ သူတို့နားလညျတယျ။ Pressure ပေးပါ။ စနဈတကြ ဒဏျခတျအရေးယူပါ။ ဒီကောငျတှေ ပွောငျးလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီနညျးသညျ Professor Sean Turnell လှတျဖို့အတှကျလညျး အကြိုးရှိပါလိမျ့မယျလို့ ကနြျောတို့ ပွောပါတယျ။
မေး ။ ။ နောကျတခုက ဒီကွားနာပှဲကိုကွညျ့ရငျ သူတို့စိတျဝငျစားတဲ့ သွစတေးလြ လှတျတျောအမတျတှေ စိတျဝငျစားတဲ့ နောကျတခကျြက တရုတျနိုငျငံရဲ့ အခနျးကဏ်ဍ။ ဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ တရုတျရဲ့ ကာကှယျနမှေုနဲ့ ပတျသကျလို့လဲ သူတို့မေးတာတှကေို တှရေ့တယျဆိုတော့ ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှကေိုယျတိုငျကလဲ ပွောခဲ့ပါတယျ သွစတေးလအြစိုးရအနနေဲ့ စဈအာဏာသိမျးထားတဲ့ စဈခေါငျးဆောငျတှကေို တရုတျကို အကာအကှယျမပေးဖို့ သွစတေးလနြိုငျငံအနနေဲ့ နားခနြိုငျပါတယျဆိုပွီး ပွောခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။ တကယျပဲ သွစတေးလနြိုငျငံအနနေဲ့ တရုတျကို အဲဒီလိုမြိုး ကိုယျဘကျပါလာအောငျလို့ ဆှဲဆောငျစညျးရုံးနိုငျမယျ့ အခွအေနေ တကယျရှိလို့လားရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောကတော့ ရှိတယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။ နောကျတခုကလဲ သွစတေးလမြှာ ပိုပွီးတော့ သွဇာရှိတာက အာဆီယံအသိုငျးအဝိုငျး။ အဲဒီအပျေါ သွစတေးလြ သွဇာက ပိုရှိပါတယျ။ ရှိတော့ တရုတျနိုငျငံအနနေဲ့ တရုတျအစိုးရအနနေဲ့ မွနျမာ့အရေးမှာ သူတို့ဝငျပါတယျ။ ဝငျပါတဲ့အကွောငျးရငျးက စဈအုပျစုသညျ သူတို့အတှကျ အကြိုးရှိမယျလို့ ယူဆတယျ။ NLD အစိုးရ၊ အရပျသားအစိုးရထကျစာရငျ စဈအုပျစုက သူတို့ရဲ့ အကြိုးစီးပှားကို ပိုပွီးတော့ ဆောငျကဉျြပေးမယျ။ ဒါကလဲ သမိုငျးသာဓကတှေ ရှိတာကွောငျ့ သူတို့က အဲဒီဘကျ ရပျတာပေါ့။ သို့သျော မွနျမာပွညျသူတှရေဲ့ သူတို့အပျေါ နာနာကညျြးကညျြး မုနျးတီးမှုတှေ သူတို့ရငျဆိုငျနရေပွီ။ နောကျတခုက သူတို့ရဲ့ အကွီးမားဆုံး အကြိုးစီးပှား - ရနေံပိုကျလိုငျးတှေ၊ ဂတျဈပိုကျလိုငျးတှကေ ခွိမျးခွောကျခံနရေတယျ။ အဲဒီတော့ အခုဆိုရငျ သူတို့တဖွညျးဖွညျး မွငျလာပွီ။ ဒါကွောငျ့လဲ သူတို့ CRPH ကို Approach ခဉျြးကပျတယျ။ သူတို့ရဲ့ အကြိုးစီးပှားတှေ၊ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှကေို ကာကှယျပေးဖို့ဆိုပွီး မတ်ေတာရပျခံတယျ။ တောငျးဆိုတယျ။ ဒါက သူတို့မှားတဲ့ဘကျကို ရောကျနပွေီ အတိုငျးအတာတခုအထိ မွငျလာပွီပေါ့။ အဲဒီတော့ သူတို့စဈအစိုးရကို ထောကျပံ့နသေရှေ့၊ သူတို့ရဲ့ interest က အမွဲတမျးခွိမျးခွောကျခံနရေမှာ။ ဒါကို သူတို့မွငျလာတယျ။ မွငျလာတော့ ကနြျောတို့က သွစတေးလအြစိုးရကို ဒီပျေါမှာ နငျးပေးပါ။ ဒီပျေါမှာ နငျးပေးပါ။ ဒီပျေါမှာ နငျးပွီးမှ တရုတျအစိုးရကို သူတို့နားလညျအောငျ သူတို့ရဲ့ မွနျမာပွညျထဲမှာရှိတဲ့ အကြိုးစီးပှားတှကေို တကယျတမျး အကာအကှယျပေးနိုငျတာ၊ တကယျတမျး လုံခွုံမှုပေးနိုငျတာ ရှေးကောကျပှဲနညျးလမျးနဲ့ ဒီမိုကရစေီနညျးလမျးနဲ့ တကျလာတဲ့ အရပျသားအစိုးရသာ ဖွဈတယျဆိုတာကို သူတို့ပိုပွီး ခိုငျခိုငျမာမာ ယုံကွညျလာအောငျ အစိုးရက တှနျးပေးပါ။ တဘကျကလဲ အာဆီယံနိုငျငံတှလေညျး သူတို့တှနျးပေးပါ။ ဒီလို တှနျးပေးခွငျးအားဖွငျ့ တရုတျက ဒီပျေါ နားလညျသှားရငျ သွစတေးလနြဲ့ တရုတျတို့ရဲ့ အခုရှိတဲ့ ဆကျဆံရေးတောငျမှ ပိုပွီးတော့ အပွုသဘောဆောငျလာတဲ့ ဆကျဆံရေးမြိုး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ တရုတျပွညျအနနေဲ့လညျး ကြေးဇူးတငျမယျပေါ့။ ဒါက လမျးကွာငျးတခု။ ဒီလမျးကွောငျးကလဲ Crisis ကွီးကို ကြျောလှာသှားဖို့ လိုအပျတဲ့ အခွအေနတေခုလို့လဲ ကနြျောတို့က တှနျးခဲ့ပါတယျ။
မေး ။ ။ ဒီသွစတေးလြ ကွားနာပှဲမှာ ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှအေပါအဝငျ သွစတေးလမြှာ ရှိနတေဲ့ တိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျတခြို့လဲ တကျပွီးတော့ တငျပွဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျဆိုတော့ အားလုံးကပွောတဲ့ထဲမှာ CRPH ကို ထောကျခံပါ။ တရားဝငျအသိအမှတျပွုပါ။ သူတို့နဲ့ ဆကျသှယျပါဆိုတာကို အားလုံးတိုကျတှနျးတာကို တှရေ့တယျ။ ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှဆေိုရငျ CRPH နဲ့ ဆကျသှယျနိုငျဖို့အတှကျကို ကိုယျတိုငျကွားကနေ ဆကျသှယျမယျဆိုရငျ ဆကျသှယျပေးပါမယျဆိုတာမြိုးကို ပွောခဲ့ပါတယျဆိုတော့ အဲဒီလိုမြိုး ကိုယျတိုကျတှနျးသလိုမြိုး တကယျလကျတှဖွေ့ဈလာဖို့ အလားအလာ ဘယျလောကျရှိပါသလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ အလားအလာက အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကနြျောတို့ အခုကွားနာပှဲမှာ တငျပွခဲ့တဲ့ မွနျမာကှနျမွူနီတီထဲမှာလညျး ကနြျောတို့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေလဲ CRPH က တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ ထိတှမှေု့တှေ ရှိပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ သွစတေးလပြါလီမနျထဲမှာ အခု Parliament Friends of Myanmar ဆိုပွီး Senator Dean Smith က ဦးဆောငျဖှဲ့ထားတဲ့ ပါလီမနျအစုအဖှဲ့ကလညျး CRPH ကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ ထိတှမှေု့တှေ ရှိပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့မို့ ကနြျောတို့တှကေ လိုအပျရငျလဲ Liaison လုပျပေးဖို့ ready ပါပဲ။ သူတို့ဘကျကလဲ တိုကျရိုကျခြိတျဆကျနိုငျတဲ့ လမျးကွောငျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ပါလီမနျအဆငျ့ထကျ ကြျောပွီးတော့ အစိုးရကလညျး ထိတှဆေ့ကျဆံပါ။ အခုက အစိုးရက မလှုပျသေးဘူး။ ပါလီမနျက very active. ဒါကွောငျ့ အစိုးရလညျးလုပျပါ။ ကနြျောတို့ဘကျမှာလဲ ကူညီပေးနိုငျတဲ့ အနအေထားတှေ ရှိတယျဆိုတာကို သူတို့သိအောငျ ဒီရေးရာကျောမတီကနေ အသိပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
မေး ။ ။ ပွောရမယျဆိုရငျ ဒီကွားနာပှဲလုပျတဲ့ လှတျတျောကျောမတီထဲမှာပါတဲ့ သွစတေးလလြှတျတျောအမတျတှေ တခြို့ကိုယျတိုငျက ပွောတယျ သွစတေးလအြစိုးရ လုပျနတောတှကေို အားမလိုအားမရ ဖွဈနတေဲ့ပုံစံမြိုးပွောတာကို ကွားရပါတယျ။ ဆိုတော့ အခုလိုမြိုး သွစတေးလမြှာ ရောကျနတေဲ့ မွနျမာအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ သဘောထားအမွငျတှေ၊ တိုကျတှနျးမှုတှကေို ကွားရတဲ့အခါမှာ လှတျတျောအမတျတှကေနေ သွစတေးလအြစိုးရကို အခုထကျပိုပွီးတော့ တှနျးတှနျးတိုကျတိုကျ ဘယျလောကျအထိ လုပျနိုငျမယျလို့ တှနျးအားပေးနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ထားသလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောတို့ကတော့ တျောတျောလေး မြှျောလငျ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီလို Public Hearing ဖွဈလာတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ ပိုမြှျောလငျ့တာပေါ့။ ပထမတော့ သူတို့ရဲ့ ပါလီမနျထဲမှာ ဆှေးနှေးမှုတှထေဲမှာ motion မွနျမာပွညျကို ပိုပွီးတော့ ထိရောကျတဲ့ အကူအညီတှေ၊ ထိရောကျတဲ့ တုံ့ပွနျမှုတှေ လုပျဖို့ဆိုတာမြိုးကို လှတျတျောအမတျတှကေ တိုကျတှနျးလာတယျ။ ဒါက ပထမအဆငျ့။ ဒီ motion ကွောငျ့မို့ သူတို့ပါလီမနျထဲမှာ ဆှေးနှေးမှုတှေ ပျေါလာတယျ။ အတိုကျအခံခေါငျးဆောငျတှကေလညျး မေးခှနျးတှေ အမြားကွီးထုတျလာတယျ။ ဝဖေနျမှုတှေ အမြားကွီးလုပျလာတယျ။ လကျရှိအစိုးရရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှအေပျေါမှာ။ အခု ကွားနာပှဲကတော့ ပါလီမနျရဲ့ မူဝါဒရေးရာပိုငျးကို ဆုံးဖွတျနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျး။ နိုငျငံခွားရေးရာနဲ့ ပွညျပဖှံ့ဖွိုးရေး အထောကျအကူပွုမှုတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ ရေးရာကျောမတီက ကွားနာတာ။ သူတို့က ပုံမှနျလှတျတျောထဲမှာ အစညျးအဝေးလုပျသလိုမြိုး မဟုတျတော့ဘူး။ ဒီကွားနာပှဲကနေ အစီရငျခံစာတခု ထှကျလာမယျ။ အစိုးရက ဘယျလိုရပျတညျပါဆိုတာ။ ဒီကွားနာတဲ့ ကျောမတီမှာ ပါတီပေါငျးစုံက ပါတယျ။ ဒီ Affair Committee ဥက်ကဋ်ဌက Mr. Dave Sharma က အာဏာရပါတီရဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ။ နောကျ နိုငျငံခွားရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ တေျာ့တျောကို သွဇာကွီးတဲ့လူ။ အခု သွစတေးလအြစိုးရ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Senator Marise Payne ကို တျောတျောလေးသွဇာရှိတယျလို့ ကနြျောတို့ သိထားတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီကွားနာပှဲကတဆငျ့ သွစတေးလအြစိုးရရဲ့ မူဝါဒပိုငျးဆိုငျရာ၊ လုပျဆောငျခကျြပိုငျးဆိုငျရာ အပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈဖို့အတှကျ အလှနျကွီးတဲ့တှနျးအားတခု ဖွဈမယျလို့ ကနြျော ယုံကွညျပါတယျ။
မေး ။ ။ နောကျ မွနျမာနိုငျငံရေး ကွားနာပှဲမှာ ပွောတဲ့နောကျတခုကကွတော့ ပွညျတှငျးမှာ မငွိမျမသကျဖွဈနတေဲ့ အခွအေနတှေကွေောငျ့ နယျစပျဘကျတှကေို တိမျရှောငျထှကျပွေးကွတဲ့ အခွအေနေ။ အဲဒီလို တိမျရှောငျထှကျပွေးတဲ့လူတှေ မြားလာမယျ့ ထိုငျး၊ အိန်ဒိယ နယျစပျဒသေတှမှော ထှကျပွေးလာမယျ့သူတှေ မြားလာမယျဆိုရငျ ဒသေတှငျး မတညျမငွိမျ ဖွဈမှုကိုပါ ထိခိုကျနိုငျတဲ့ အခကျြကိုပါ ထောကျပွကွတာ တှပေ့ါတယျ။ သွစတေးလနြိုငျငံအနနေဲ့ အခုလို မွနျမာနိုငျငံမှာဖွဈနတေဲ့ မတညျငွိမျမှုတှကေနေ ဒသေတှငျးမှာ တညျငွိမျမှုပကျြပွားလာမယျ့ ဂယကျကို ဘယျလောကျအထိ ဒီအပျေါမှာ စိုးရိမျမှုရှိသလဲဆိုတာကို ပွောပွပါလားရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ သူတို့ အဲဒါကို တျောတျောလေး စိုးရိမျမှုရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ကွားနာပှဲကို တကျရောကျပွောကွားမယျ့ လူတှကေို မေးခှနျးတှေ (၄) ခု မေးထားတယျ။ Emphasize လုပျတာပေါ့။ အဲဒီအထဲမှာ မေးခှနျးတခုက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီစဈအစိုးရက ဘယျလောကျထိကွာကွာ အုပျခြုပျသှားနိုငျသလဲ။ ဒါက သူတို့ စိုးရိမျတာ။ အဲဒီမေးခှနျးနဲပ ပတျသကျလို့ ကနြျောဖွခေဲ့တာက ဒီစဈအာဏာသိမျးတယျဆိုတာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့သမိုငျးမှာ စဈအာဏာရှငျစနဈ တတိယအကွိမျလညျတာ။ သံသရာစကျဝိုငျး Vicious Circle - ဒီစဈအာဏာရှငျစနဈသာ ဒီနိုငျငံမှာ တညျမွဲနသေရှေ့ ဒီလိုသံသရာစကျဝိုငျးကွီးက ဆကျလညျနမှော၊ အဖနျတလဲလဲ ဖွဈနအေုံးမှာ။ ဘယျတော့မှ ပွီဆုံးသှားမှာ မဟုတျဘူး။ ဒီစဈအာဏာရှငျစနဈ ရှိနသေရှေ့ ဒီဒုက်ခသညျပွဿနာတှေ ရှိနမေယျ။ မူးယဈဆေးဝါး ပွဿနာတှလေညျး ရှိမယျ။ မူးယဈဆေးဝါးဆိုရငျ သွစတေးလကြ အကွီးအကယျြ ခံနရေတာ။ တနှဈကို သွစတေးလအြစိုးရက ၁.၇ ဘီလီယံ သုံးရတယျ။ မူးယဈဆေးဝါးမှာလညျး အမြားဆုံး ပွဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ Methamphetamine စိတျကွှဆေး ဖွဈတယျ။ အဲဒီဆေးက အမြားဆုံး မွနျမာပွညျကလာတာ။ မွနျမာပွညျမှာ ဘယျမှာထုတျသလဲဆိုရငျ မွနျမာနဲ့ တရုတျ၊ လားအိုနယျစပျတှမှော ထုတျနတော။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ Raw Materials တှကေ တရုတျကလာတာ။ အဲဒီတော့ အစိုးရက ဒီဟာတှေ ရငျဆိုငျနရေပွီ၊ ခံစားနရေပွီ။ ကနြျောက ပွောခဲ့တယျ It’s enough သွစတေးလအြစိုးရအနနေဲ့ ခံစားနရေတာ လုံလောကျပွီ။ အဲဒီတော့ သွစတေးလအြစိုးရရဲ့ National Interest က ဘာလဲဆိုရငျ စဈအာဏာရှငျစနဈကို ခြုပျငွိမျးအောငျလုပျဖို့ National Interest လို့ ကနြျော ပွောခဲ့ပါတယျ။
မေး ။ ။ နောကျဆုံး မေးခငျြတာက ဧပွီလ (၁၃) ရကျနတေု့နျးက သွစတေးလလြှတျတျော ကွားနာပှဲမှာ လုပျခဲ့တဲ့ မွနျမာ့အရေး ကွားနာပှဲကနေ နောကျဆုံး ဘယျလိုရလဒျတှေ ထှကျလာနိုငျသလဲ။ နောကျဆုံး ဥပမာ လှတျတျောကနေ မွနျမာ့အရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ ဆုံးဖွတျခကျြခတြာမြိုး ဘယျလောကျအထိ ရလဒျတှေ ထှကျလာမယျလို့ ခနျ့မှနျးလို့ ရသလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောကတော့ တျောတျောလေးကို Positively အပွုသဘောဆောငျမယျ့ ရလဒျတှေ အမြားကွီးရမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကနြျောတို့ ပွောလိုကျတဲ့ စကားမှာ ဒီကွားနာပှဲပွီးရငျ ကနြျောတို့ ပွောခဲ့တဲ့ ဆှေးနှေးခဲ့တဲ့အခကျြတှကေို ပွနျပို့မယျ။ သူတို့သိခငျြတာတှကေိုလညျး ထပျမေးမယျ။ ကနြျောတို့ကလညျး ဖွခေဲ့ရတဲ့ အဖွပေျေါမှာ၊ ပိုပွီးပွညျ့ပွညျ့စုံစုံဖွဈအောငျ ထပျဖွညျ့ပေးမယျ။ သူတို့ဆိုလိုတာက Very comprehensive responses တှကေို ယူမယျ။ ကနြျောတို့ နှုတျနဲ့ပွောတာတငျမကဘူး၊ ပွနျစဉျးစားပွီး ဖွပေေးတာကိုယူမယျ။ ဒါတှကေို အခွခေံပွီး သူတို့က သခြောပေါကျ Report တခု ထှကျမှာပဲ။ ကွားနာပှဲကနေ ဘာတှရေတယျဆိုတဲ့အပျေါမှာ အခွခေံပွီးတော့ သွစတေးလအြစိုးရနဲ့ လှတျတျောကို သူတို့က သွစတေးလအြစိုးရအနနေဲ့ ဒီအနအေထားမှာ ဘယျလိုတုံ့ပွနျဆောငျရှကျသငျ့တယျ။ လကျရှိ မူတှနေဲ့ ကိုကျညီခွငျး ရှိမရှိဆိုတာတှကေို သုံးသပျတယျ။ နောကျ တိုကျတှနျးမှုတှပေါတဲ့ အစီရငျခံစာ ထှကျလာမယျလို့ ယူဆတယျ။ ဒါက နံပတျ (၁)။ နံပတျ (၂) က ဒီကွားနာပှဲလေးတခုနဲ့ မပွီဘူး။ ကနြျောတို့ကလဲ ကနြျောတို့ ပွောခဲ့တဲ့ စကားတှအေတှကျ ဒီကျောမတီနဲ့ ကနြျောတို့ ဆကျပွီးတော့ Follow up လုပျနမေယျ။ တိုကျတှနျးနမေယျ။ ခြိတျဆကျမှုတှေ ရှိနမေယျဆိုတော့ One of activities မဟုတျပါဘူး။ တခြိနျတညျး ပွီးသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကနြျောတို့ ဆကျလုပျနမှောပါ။
မစုမွတျမှနျ ။ ။ ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှေ အခုလို အခြိနျပေးပွီး ဖွပေေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျရှငျ့။
ဒေါကျတာထှနျးအောငျရှေ ။ ။ ကနြျောကလညျး ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျ။